Mogadishu Journal » 2018 » August » 2
Shirkii Golaha Wasiirada DF oo Garoowe ku soo dhamaaday
Mjournal :-Shirkaan wadajirka ah ee ay maanta Magaaladda Garoowe ku yeesheen xubnaha Golaha Wasiiradda Xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo Wasiiradda dowlad Goboleedka puntland, ayaa looga hadlayey xoojinta wada shaqaynta wasaaradaha dowladda dhexe iyo Maamulka Puntland, isla...
Jabuuti oo ku gacan seyrtey go’aan ay maxkamad ku taal London ka gaartay dacwada DPW
Mjournal :-Dowlada Jabuuti ayaa diidey go’aan ay ka gaartay Maxkamadda dhexdhexaadinta caalamiga ah ee London dacwaddii u dhexaysay Jamhuuriyadda Jabuuti iyo Shirkadda Dubai Ports World. Maxkamadda ayaa xukuntay inuu shaqaynayo heshiiskii u dhexeeyay labada dhinac ee ay dawladda...
Shirka Golaha Wasiirada oo ka furmay Garowe
Mjournal : -Magaalada Garowe ee caasimadda mamulka Puntland waxaa galabta ka furmay shirka Golaha Wasiirada Soomaalya, kaasi oo looga hadlayo arrimo badan oo la xiriiira xaalada dalka. Shirkan oo uu guddoominayo Ra’iisul Wasaaraha Xukuumada federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre...
Ganacsade goor dhaw lagu dilay Muqdisho
Mjounal :-Wararka aan ka heleyno isgoyska Banaadir ee magaalada Muqdisho ayaa waxa ay sheegayaan in duhurnimadii maanta halkaasi lagu dilay Wiil dhalinyaro ahaa oo si weyn looga garanayay magaalada Muqdisho. Goobjoogayaal ayaa sheegay in rag hubeysan ay agagaarka Isgoyska...
Madaxweynaha Somaliland oo ka hadlay qaraxii Buuhoodle
Mjournal :-Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi oo si kulul uga hadlay qaraxii xalay fiidkii ka dhacay magaalada Buuhoodle ee gobolka Togdheer ayaa tacsi u diray ehelada dadkii dhimashada iyo dhaawaca ka soo gaaray qaraxaasi, kadib qoraal ka soo baxay xafiiskiisa. Qaraxaasi...
RW Khayre iyo Senator C/raxmaan Faroole oo wada hadal yeeshay (SAWIRRO)
Mjournal :-Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa gurigiisa oo ku yaalla magaalada Garowe ku booqday Senator C/raxmaan Sheekh Maxamed Faroole. Labada masuul ayaa waxa ay ka wada hadleen arrimo badan oo ay ka mid yihiin sidii dowladnimada loo...
Maxkamadda ciidamada oo xukuntay rag ka tirsanaa Daacish
Mjournal :-Maxkamadda Darajada Koowaad Ciidamada Qalabka Sida ee Soomaaliya ayaa maanta oo Khamiis ah waxa ay xukun ku riday Laba nin oo ka tirsanaa Ururka Daacish qeybta ka hawlgasha Soomaaliya. Maxkamadda ayaa waxa ay horey u soo saartay dhawr fadhi oo heerarka maxkamadeynta...
Waa maxay sababta Aaron Ramsey useegay kulankii Chelsea?
Unai Emery ayaa cadeeyay in Aaron Ramsey aysan heysan dhibaato weyn ka dib markii laga saaray kulankii kooxdiisa garaacday Chelsea. Ciyaaryahanka khadka dhexe ee Wales ayaa ku jiray line-upka sida qorshuhu ahaa, laakiin waxaa lagu bedelay Emile Smith Rowe kulankii xalay. “Waxaa...
Shirkii Golaha Wasiirada Soomaaliya oo la isku raacay inuu maanta ka qabsoomo Garowe, kaddib shaki la geliyay
Mjournal :-Shirkii Golaha Wasiirada Soomaaliya ayaa la isku raacay inuu ka dhaco magaalada Garowe, kaddib wada hadalo dhex maray Ra’iisul Wasaaraha iyo Madaxda Puntland oo ku aadan sidii shirka u qabsoomi lahaa. Shirka ayaa qabsoomidiisa shaki la geliyay, kaddib markii Puntland...
Wararkii ugu dambeeyay Xaalada Buuhoodle iyo Qaraxii ismiidaaminta ee xalay ka dhacay
Mjournal :-Iyadoo xalay magaalada Buuhoodle uu ka dhacay qarax ismiidaamin oo ahaa kii u horeeyay nuuciisa ee ka dhacay magaalada iyo gobolkaba ayaa waxaa saaka laga dareemayaa degmada xaalad caadi ah, kaddib bandow xalay la geliyay magaalada. Dadka deegaanka ayaa hadal hayay...